တာချီလိတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတ်တမ်းယူသည့်စနစ် စတင်အသုံးပြုမည် – Myanmar Live
တာချီလိတ်နယ်စပ်ဂိတ်တွင် လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှတ်တမ်းယူသည့်စနစ် စတင်အသုံးပြုမည်
November 6, 2019 November 6, 2019 - by arnakorn saengsiritrakun
မြန်မာ – ထိုင်းနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့ရှိ မြန်မာ – ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ်(၁) မှ နှစ်နိုင်ငံ အဝင်အထွက်ကို လုံခြုံရေးမြှင့်တင်မှုအဖြစ် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား မှတ်တမ်းယူသည့်စနစ် (Biometric Enrollment System) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း စတင်အသုံးပြုတော့မည်ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်တံတားပေါ်တွင် မြန်မာဘက်အဝင်နှင့် ထိုင်းဘက်အထွက် နေရာ (၂)ခု၌ Biometric Enrollment System စနစ်အသုံးပြုနိုင်ရေး စက်များတပ်ဆင်ခြင်းကို နိုဝင်ဘာ လ (၅)ရက်နေ့တွင် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ က စတင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“စက်တွေကို မြန်မာဘက်အဝင်မှာ (၁) လုံး၊ ထိုင်းဘက်အထွက်မှာ (၁) လုံးတပ်မယ်”ဟု တာချီလိတ်ခရိုင် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။Biometric Enrollment System ဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ အောက်တိုဘာ (၂၆) ရက်နေ့နှင့် နိုဝင်ဘာ လ (၂) ရက်နေ့များ၌ ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်းအား လုံခြုံရေးစနစ် တိုးမြှင့်သည့် အနေဖြင့် လက်ဗွေမှတ်တမ်းဖြင့် ထုတ်ပေးခြင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်အ သုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာ – ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံ ဖြတ်သန်းသွားလာနေသည့် ချစ်ကြည်ရေးတံတားမှ နှစ်နိုင်ငံ တရားခံပြေးများဖြတ်သန်းသွား လာမှုကို တားမြစ်နိုင်ရန်အတွက် ယင်းကဲ့သို့ လုံခြုံရေးစနစ် တိုးမြှင့်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကလည်း နယ်စပ်ဖြတ်သန်းသည့်လက်မှတ်များ လုံခြုံရေးအဆင့် မြှင့်တင်မှုအဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံး ဆာဗာချိတ်ဆက်ပြီး အချက်အလက်ရယူသည့်စနစ်ကို ဇူလိုင်လ (၆)ရက်နေ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာဘက်မှ လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်လိုက်သည့် ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်လက်မှတ်များတွင် လုံခြုံရေးကြိုး ၊ လိုဂိုရေစာများအပြင် QR Code တို့ ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားသည်ဟု သိရသည်။
အချက်အလက်နှင့်ဓာတ်ပုံများအတွင်ကျေးဇူးတင်ပါသည် : Tachileik News Agency, thiteaw
TaggedMyanmarMyanmar live newsMyanmarliveသတင်းများမြန်မာ
အသားစိမ်းငါးစိမ်းစားကြလေ့ရှိတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေကို ကပ်ပါးရောဂါသုတေသနဌာနမှသတိပေး !
Previous Article မဲ့ဆောက်မြို့ရှိနာမည်ကြီးမြန်မာစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင် ဘတ် ၁ သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိလက်ဝတ်ရတနာများနှင့်ငွေသားများခိုးယူခံရ !!
Next Article LGBT မော်ဒယ် Sinon loresca နဲ့ဇာတ်ကား အတူရိုက်ခဲ့တဲ့အကြောင်း မြင့်မြတ် ဖွင့်ဟ